ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပုံစံ 925 Sterling Silver Clip -on အမျိုးသမီးနားကပ်များ ၀ ယ်ပါ၊ ပို့ဆောင်ခအခမဲ့၊ အခွန်မပါ WoopShop®
European & American Style 925 Sterling Silver Clip-on အမျိုးသမီးနားကပ်
ကျောက်မျက်အရောင် E7 E2 E1 E4 E3 E6 E5 E18 E19 E20 E14 E15 E16 E17 E10 E11 E40 E12 E39 E13 E38 E37 E36 E8 E35 E9 E34 E33 E32 E31 E30 E29 E28 E27 E26 E25 E24 E23 E22 E21
European & American Style 925 Sterling Silver Clip -on အမျိုးသမီးနားကပ် - E7 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ကျား: အမျိုးသမီးများနေ့, မိန်းကလေး
အရောင်: ရွှေ, ငွေ
ပစ္စည်း: Sterling ငွေ 925
စုံလင် !! ငါအရမ်းကျေနပ်တယ် !!